လူတိုငျး မလုပျနိုငျတဲ့အရာ (၉) ခု
HomeKnowledgeလူတိုငျး မလုပျနိုငျတဲ့အရာ (၉) ခု
H November 07, 2020
လူတိုငျးမှာ ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးတှေ ရှိကွပါတယျ။ တခြို့လူတှကေတော့ အံ့ဩစရာကောငျးလောကျအောငျ အရညျအခငျြးတှေ ရှိကွပါတယျ။ တခြို့လူတှဆေိုရငျ နားရှကျကို လိမျလို့မရတာ၊ မကျြခုံးကို ပငျ့မရတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။
1. လကျသူကွှယျ မရှခွေ့ငျး
လူအမြားစုက လကျခလယျကို ရှလေို့ကျရငျ လကျသူကွှယျကပါ အနညျးငယျစောငျးသှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့တှကေ လကျခလယျရှလေို့ကျရငျ လကျသူကွှယျလိုကျမစောငျးဘဲ သီးသနျ့ဖွဈနတေတျပါတယျ။
2. မေးစေ့ သို့မဟုတျ နှာခေါငျးကို လြှာဖွငျ့ထိခွငျး
လူအမြားစုက လြှာကို အရှညျကွီးမဆနျ့ထုတျနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ တခြို့ကတော့ လြှာဖြားနဲ့ နှာခေါငျး၊ မေးစတှေ့ကေို ထိလို့ရပါတယျ။ အဲဒီလိုထိလို့ရတာကို Gorlin လက်ခဏာလို့ ချေါပါတယျ။ ဒီလိုထိနိုငျတာ ကမ်ဘာ့လူဦးရရေဲ့ 10 ရာခိုငျနှုနျးပဲ ရှိပါတယျ။
3. ခွခြေောငျးလေးတှနေဲ့ လထေဲမှာ စာရေးခွငျး
ခွထေောကျကို မ,လိုကျပွီး ခွဖေဝါးကို လှနျလိုကျပါ။ ပွီးတော့ ခွမေနဲ့ အင်ျဂလိပျနံပါတျ6ကို နာရီလကျတံ အတညျ့အတိုငျးရေးပါ။ စာရှကျတှေ၊ ခဲတံတှေ မလိုပါဘူး။ လထေဲမှာတငျ ခွမေနဲ့ ရေးရုံပါပဲ။ပုံမှနျဆိုရငျ အင်ျဂလိပျနံပါတျ6ကို နာရီလကျတံပွောငျးပွနျအတိုငျး ဆှဲရတာပါ။ အခုက အင်ျဂလိပျနံပါတျ6ကို နာရီလကျတံ အတညျ့အတိုငျး ရေးရတာဖွဈတဲ့အတှကျ မလှယျကူဘူးဆိုတာ လူအမြားစုက သတိထားမိ လာကွပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ထားတဲ့သူ သို့မဟုတျ တဈမူထူးခွားတဲ့သူကပဲ6ကို နာရီလကျတံအတညျ့အတိုငျး ခွမေနဲ့ ဆှဲနိုငျတာပါ။
သငျ့နှာခေါငျးကို Samantha Stephens လိုမြိုး ရှုံ့နိုငျဖို့ဆိုတာ သိပျမဖွဈနိုငျပါဘူး။ Elizabeth Montgomery ပှဲမှာ Bewitched တောငျမှ နှာခေါငျးရှုံ့ဖို့အတှကျ ပါးစပျတှနျ့ရပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့ကတော့ နှာခေါငျးကို ပါးစပျမတှနျ့ဘဲ အလိုလိုရှုံ့တတျကွပါတယျ။ နှာခေါငျးရှုံ့တတျခငျြရငျ နှာခေါငျးပေါကျကို ရှုံ့နိုငျအောငျ အရငျကွိုးစားကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
သငျ့လြှာကို အပျေါဘကျသို့ လိပျတငျလိုကျတဲ့အခါ ပါးစပျပှငျ့သှား ပါလိမျ့မယျ။ အဲဒါကို လြှာလိပျခွငျးလို့ ချေါပါတယျ။ တံတှေးပွှနျက သနျမာရငျ လြှာလိပျလို့ ရပါတယျ။ ရှိုတျစပီးယားရဲ့ ပွဇာတျအတျောမြားမြားမှာ လြှာလိပျခွငျးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ထညျ့သုံးကွပါတယျ။
6. မကျြလုံးဖှငျ့လကျြ နှာခခြွေငျး
ဦးခေါငျးခှံနာဗျကွောတှကေ နှာခေါငျးနဲ့ မကျြလုံးတှကေို ဆကျပေးထားပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လူအမြားစု နှာခတြေဲ့အခါ မကျြလုံးက အလိုအလြောကျ ပိတျသှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့တှကေတော့ မကျြလုံးဖှငျ့ပွီး နှာခလြေို့ရပါတယျ။ မကျြလုံးဖှငျ့ပွီး နှာခလြေိုကျလို့ သငျ့မကျြလုံးတှေ ရှကေို့ ပွူးမထှကျလာပါဘူးနျော။
7. လြှာကို တဈဝကျခေါကျခွငျး
လြှာကို တဈဝကျခေါကျတာက ကမ်ဘာပျေါကလူတိုငျး လုပျနိုငျတဲ့အရာ မဟုတျပါဘူး။ မကျြလှညျ့ပညာရှငျတခြို့ပဲ လုပျနိုငျပါတယျ။
8. ကိုယျ့ကိုယျကို ကလိထိုးခွငျး
လူအမြားစုက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကလိထိုးလို့မရပါဘူး။ ကလိထိုးတယျဆိုတာ အံ့ဩစရာတဈခုပါပဲ။ ဦးနှောကျက အထိအတှကေို့ သိရှိမှသာ ကလိထိုးတဲ့အခါ ယားတာပါ။ ဦးနှောကျရဲ့လုပျငနျးတှေ အစီအစဉျမကဖြွဈတဲ့ သူတှကေ အထိအတှကေို့ မခံစားမသိရှိနိုငျဘဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကလိထိုးလညျး ယားပါတယျ။
9. လကျမကို နောကျဘကျသို့ကှေးခွငျး
တခြို့လူတှမှော လကျမအဆဈနှဈခု ပါ ပါတယျ။ ဒီလို ပါဝငျတဲ့လူတှကေ လကျမကို နောကျဘကျသို့ ကှေးလို့ရပါတယျ။ အဆဈနှဈခုပါနလေို့ လကျမကို နောကျဖကျကို ကှေးလိုကျလညျး နာကငျြမှု မခံစားရပါဘူး။ တခြို့တှကေ့တြော့ လကျမနှဈခြောငျးလုံးမှာ အဆဈနှဈခု စီပါပွီး လကျမတဈခြောငျးတညျးကသာလြှငျ အနောကျဘကျကို ကှေးလို့ရပါတယျ။
လူတိုင်း မလုပ်နိုင်တဲ့အရာ (၉) ခု
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ တချို့လူတွေကတော့ အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် အရည်အချင်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ တချို့လူတွေဆိုရင် နားရွက်ကို လိမ်လို့မရတာ၊ မျက်ခုံးကို ပင့်မရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
1. လက်သူကြွယ် မရွေ့ခြင်း
လူအများစုက လက်ခလယ်ကို ရွေ့လိုက်ရင် လက်သူကြွယ်ကပါ အနည်းငယ်စောင်းသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့တွေက လက်ခလယ်ရွေ့လိုက်ရင် လက်သူကြွယ်လိုက်မစောင်းဘဲ သီးသန့်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
2. မေးစေ့ သို့မဟုတ် နှာခေါင်းကို လျှာဖြင့်ထိခြင်း
လူအများစုက လျှာကို အရှည်ကြီးမဆန့်ထုတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ် တချို့ကတော့ လျှာဖျားနဲ့ နှာခေါင်း၊ မေးစေ့တွေကို ထိလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုထိလို့ရတာကို Gorlin လက္ခဏာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုထိနိုင်တာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ 10 ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။
3. ခြေချောင်းလေးတွေနဲ့ လေထဲမှာ စာရေးခြင်း
ခြေထောက်ကို မ,လိုက်ပြီး ခြေဖဝါးကို လှန်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ခြေမနဲ့ အင်္ဂလိပ်နံပါတ်6ကို နာရီလက်တံ အတည့်အတိုင်းရေးပါ။ စာရွက်တွေ၊ ခဲတံတွေ မလိုပါဘူး။ လေထဲမှာတင် ခြေမနဲ့ ရေးရုံပါပဲ။ပုံမှန်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်နံပါတ်6ကို နာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်း ဆွဲရတာပါ။ အခုက အင်္ဂလိပ်နံပါတ်6ကို နာရီလက်တံ အတည့်အတိုင်း ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် မလွယ်ကူဘူးဆိုတာ လူအများစုက သတိထားမိ လာကြပါတယ်။ လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူ သို့မဟုတ် တစ်မူထူးခြားတဲ့သူကပဲ6ကို နာရီလက်တံအတည့်အတိုင်း ခြေမနဲ့ ဆွဲနိုင်တာပါ။
သင့်နှာခေါင်းကို Samantha Stephens လိုမျိုး ရှုံ့နိုင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Elizabeth Montgomery ပွဲမှာ Bewitched တောင်မှ နှာခေါင်းရှုံ့ဖို့အတွက် ပါးစပ်တွန့်ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ နှာခေါင်းကို ပါးစပ်မတွန့်ဘဲ အလိုလိုရှုံ့တတ်ကြပါတယ်။ နှာခေါင်းရှုံ့တတ်ချင်ရင် နှာခေါင်းပေါက်ကို ရှုံ့နိုင်အောင် အရင်ကြိုးစားကြည့်လို့ ရပါတယ်။
သင့်လျှာကို အပေါ်ဘက်သို့ လိပ်တင်လိုက်တဲ့အခါ ပါးစပ်ပွင့်သွား ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို လျှာလိပ်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ တံတွေးပြွန်က သန်မာရင် လျှာလိပ်လို့ ရပါတယ်။ ရှိုတ်စပီးယားရဲ့ ပြဇာတ်အတော်များများမှာ လျှာလိပ်ခြင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ထည့်သုံးကြပါတယ်။
6. မျက်လုံးဖွင့်လျက် နှာချေခြင်း
ဦးခေါင်းခွံနာဗ်ကြောတွေက နှာခေါင်းနဲ့ မျက်လုံးတွေကို ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူအများစု နှာချေတဲ့အခါ မျက်လုံးက အလိုအလျောက် ပိတ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့တွေကတော့ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး နှာချေလို့ရပါတယ်။ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး နှာချေလိုက်လို့ သင့်မျက်လုံးတွေ ရှေ့ကို ပြူးမထွက်လာပါဘူးနော်။
7. လျှာကို တစ်ဝက်ခေါက်ခြင်း
လျှာကို တစ်ဝက်ခေါက်တာက ကမ္ဘာပေါ်ကလူတိုင်း လုပ်နိုင်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်လှည့်ပညာရှင်တချို့ပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
8. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကလိထိုးခြင်း
လူအများစုက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကလိထိုးလို့မရပါဘူး။ ကလိထိုးတယ်ဆိုတာ အံ့ဩစရာတစ်ခုပါပဲ။ ဦးနှောက်က အထိအတွေ့ကို သိရှိမှသာ ကလိထိုးတဲ့အခါ ယားတာပါ။ ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ အစီအစဉ်မကျဖြစ်တဲ့ သူတွေက အထိအတွေ့ကို မခံစားမသိရှိနိုင်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကလိထိုးလည်း ယားပါတယ်။
9. လက်မကို နောက်ဘက်သို့ကွေးခြင်း
တချို့လူတွေမှာ လက်မအဆစ်နှစ်ခု ပါ ပါတယ်။ ဒီလို ပါဝင်တဲ့လူတွေက လက်မကို နောက်ဘက်သို့ ကွေးလို့ရပါတယ်။ အဆစ်နှစ်ခုပါနေလို့ လက်မကို နောက်ဖက်ကို ကွေးလိုက်လည်း နာကျင်မှု မခံစားရပါဘူး။ တချို့တွေ့ကျတော့ လက်မနှစ်ချောင်းလုံးမှာ အဆစ်နှစ်ခု စီပါပြီး လက်မတစ်ချောင်းတည်းကသာလျှင် အနောက်ဘက်ကို ကွေးလို့ရပါတယ်။